Ndeapi Akanaka Meseji Mameseji Kakawanda? | Martech Zone
Svondo, June 17, 2018 Svondo, June 17, 2018 Douglas Karr
Pamwe hapana kana chiteshi chekushambadzira chakanangana uye nekununura zvirinani uye kupindurwa kwemhinduro pane kutumira mameseji (SMS). Kambani inoregeredza vanyori vayo veSMS ichaona yavo yekirabhu kirabhu ichiderera uye kuwana mari pamwe chete nayo. Kune rimwe divi remitambo, kuputira vatengi mameseji kunogona kuvatsamwisa uye zvingangoguma nekuwanda kwevanozvinyora.
Iyo infographic tsananguro yeSMS yekushambadzira yakanakisa maitiro uye inopa maonero kune maitiro evanyoreri, kusanganisira:
Maitiro ekuyera zvakanaka kukosha kwehupenyu hwese kunyorera weSMS.
Maitiro ekuti uwane mvumo yekushambadzira kuburikidza neSMS kune ako ekunyora mazita.
Maitiro ekutsvagisa izvo vanyori vanyoreri vanoda uye kuti vanoida kangani.
Maitiro ekumisikidza makiyi metric uye nekuyera zviyero zvako.
Wese mvumo-yakavakirwa mushambadzi inofanirwa kuyera mameseji frequency, huwandu hwakazara, uye inopa kuona kuti vari kupa kukosha kune tarisiro. Kana iwe uchida imwe nzwisiso yekuvaka inoshanda yeSMS yekushambadzira mishandirapamwe, isu tine imwe chinyorwa pane iyo 6 yakakosha zvinhu zvekutumira mameseji.
Nekutumira mameseji eSMS, izvi zvinogona kuve zvakakosha kupfuura chero imwe svikiro yakapihwa kuti munhu anenge achinyorera ari kupa mvumo yekuzviwana pachezvako. Neon SMS, hombe yekutengesa zvinyorwa muIreland, yakagadzira iyi infographic - Maitiro Ekuwana iyo Balance Zvakarurama muSMS Kushambadzira kupa mamwe matipi, matanho, uye mazano ekuvandudza yako mameseji mameseji zano.